Sampana Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orleans
Hoy Jesosy: « Izaho no voaloboka, ianareo no sampany. Izay miray amiko, ary Izaho aminy, dia mamoa be izy; fa raha misaraka amiko kosa ianareo, dia tsy mahay manao na inona na inona. » Jaona 15:5
Manana Sampana maro samihafa ao aminy ny FLM. Ireo Sampana ireo no fiasana eo am-pelatànany mba ho fanatanterahana ny zava-kendreny.
Ny Sampam-pikambanana dia natao ho fanabeazana amin’ny Finoana sy ny asa ny mpikambana rehetra ao amin’ny Fiangonana, amin’ny ambaratongampitondrana rehetra.
Mirafitra amin’ny ambaratongam-pitondrana ato amin’ny FLM ny Sampana ka manaiky sy mankato ireny ambaratongam-pitondrana ireny araka ny Lalam-panorenana sy ny Fitsipika manankery ao aminy.
> Raha te-ahafantatra misimisy kokoa momba ny Sampana dia jereo ao amin’ny lalam-panorenan’ny FLM – Fizaràna faharoa, toko faha-IV, p. 82
Sekoly Alahady – Sa.Lo.Ma
Ny SEKOLY ALAHADY LOTERANA (SALOMA) dia isan’ny Sampam-Pikambanana ato amin’ny FLM. Miandraikitra manokana ny fitoriana ny Filazantsara amin’ny ankizy sy ny fanabeazana azy no ataony. Eto amintsika eto Orléans dia tahatahaka izao no momba ny Sekoly Alahady: Nanomboka tamin’ny taona 2011 no nisy Sekoly Alahady ara-dalàna nijoro teto amin’ny Fiangonana. Pastora RAMAROKOTO Herilala no nitondra …
KTLM – Kristiana Tanora Loterana Malagasy
— Pejy an-dalam-panoratana — Filoha: Atoa BUTTON Andry Ho an’ny rantsana ANTOKOM-PIHIRA, ato anatin’ny Kristiana Tanora dia ny isan’alahady, aorian’ny fotoam-pivavahana no ivoriana hianarana hira sy hamerenan-kira. Manana anjara hira isaky ny aorian’ny toriteny isan’alahady ny antokom-pihira.
FBL – Fikambanam-Behivavy Loterana
— Pejy an-dalam-panoratana — Filoha: Rtoa RAJOHARISON Perle Ny FBL dia mandray anjara amin’ny hetsika samihafa eto amin’ny Fiangonana sy any amin’ny ambaratonga isanisany (Fitandremana, Fileovana, Synoda). Eo am-pametrahana ny lamina rehetra ny Komity FBL ankehitriny, taorian’ny naha-voafidy azy ho amin’ny efa-taona manaraka. Ho arahintsika eto tsy ho ela ny tohiny. Ho voninahitr’Andriamanitra irery ihany.
FDL – Fikambanan-dehilahy Loterana
— Pejy an-dalam-panoratana — Filoha: Atoa RASOLO Tantely Ny FDL dia Sampana vaovao eto amin’ny Fiangonantsika iantsoana ny lehilahy rehetra tsy ankanavaka. Manomboka amin’ity taona 2016 ity ny fisiany eto amin’ny FLM Orléans, ary inoana fa itomboana sy ivelarana tokoa eo amin’ny fanarahana ny Tompo sy ny maha andrin’ny Fianakaviana sy ireo adidy sy andraikitra …
Fi.Fi.L – Firaisan’ny Fifohazana Loterana
— Pejy an-dalam-panoratana — Filoha: Rtoa ANDRIANAIVO Fara Mijoro eto amin’ny Fiangonana FLM Orléans ny FiFiL, izay ahitàna ireo Mpiandry. Manao ny asa sy fampaherezana in-1 ka hatramin’ny in-2 isam-bolana izy ireo ary mandray anjara koa eo amin’ny asa fifohazana nanirahan’i Jesosy azy, araka ny fampianarana sy fiofanana raisiny. Misy mpiandry fito eo ho eo …
Sampana Sekoly Alahady – Sa.Lo.Ma KTLM – Kristiana Tanora Loterana Malagasy FBL – Fikambanam-Behivavy Loterana FDL – Fikambanan-dehilahy Loterana Fi.Fi.L – Firaisan’ny Fifohazana Loterana